Alahady 07/02/2016 : Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
« Isika tsirairay no antsoin’Andriamanitra sy irahiny »
Isika rehetra no antsoin’Andriamanitra sy irahiny, io no foto-kevitra anentanan’ny Fiangonana antsika amin’izao andro alahady izao. Miainga amin’ny Evanjely teo isika dia i Jesoa nampianatra, nitangoronan’ny olona tao izy ary sempotra tao ka saika tsy afaka niteny intsony. Ary izay no nahatonga an’i Jesoa niditra tamina sambo iray izay tsy nampoizina fa hay sambon’i Simôna, nihataka kely tamin’ny tany izy izay vao nipetraka nampianatra. Io sahady dia efa misy hevitra tonga ao an-tsaintsika ; io sambokely io dia tandindon’ny Eglizy io, tao anatin’io Eglizy io i Jesoa no nampianatra.
Rehefa nampianatra i Jesoa dia niteny tamin’i Simôna : mandrosoa eny amin’ny lalina dia arotsahy ny haratonareo, dia hoy i Simôna hoe efa niasa nandritra ny alina izahay fa tsy nahazo nefa noho ny teninao dia halatsako ihany ny harato. Nosarihana ny harato avy dia rovitra satria feno trondro, dia nantsoina ny sambon-dry Joany sy Jakoba avy eo dia nofenoina trondro koa ka saika nilentika, rehefa izay dia niankohoka teo an-tongotr’i Jesoa i Simôna sady niteny hoe : mialà amiko ry Tompo fa mpanota aho. Dia i Jesoa niteny hoe manomboka izao dia hataoko mpanarato olona ianareo dia nilaozan’izy ireo ny haratony ka lasa ry zareo nanaraka an’i Jesoa, izany hoe teo on nanomboka nanaraka an’i Jesoa i Simôna sy ireo mpianatra roalahy. Namoy ny zavatra rehetra ka lasa nanaraka an’i Jesoa, io no tena fahagagana io, tsy ilay nahazo trondro be dia be fa ireto mpianatra nahafoy ny zavatra rehetra ka lasa nanaraka an’i Jesoa.
Dia tahaka izay koa tao amin’ny vakiteny voalohany, dia ny niantsoana an’i Izaia mpaminany, mbola vao tovolahy roapolo taona monja izy, nivavaka tao amin’ny tempoly dia nisy Serafima teo izay ambony laharana indrindra amin’ny anjely niseho taminy. Loza ho ahy hoy i Izaia, izaho maloto molotra, ny fireneko maloto molotra nefa izaho nahita ny Andriamanitry ny tafika. Dia nitsangana ny serafima iray nanidina dia naka vain’afo tamin’ny tandramokotra dia nakasony teo amin’ny molotr’i Izaia, nodiovina ny molotr’i Izaia dia nisy feo niantso avy eo nanao hoe « iza no hirahiko » dia namaly Izaia nanao hoe « inty aho, iraho aho ». Fanirahana io, itantsika tao amin’ny Evanjely i Simôna sy ireo mpianatra roalahy nanaraka an’i Jesoa, itantsika tao amin’ny vakiteny voalohany ny niantsoan’Andriamanitra an’i Izaia izay nahatsapa sy niaiky ny fahalemeny teo anatrehan’Andriamanitra fa nodiavin’Andriamanitra ny molony ka afaka nandeha nitory ny Vaovao Mahafaly, tahak’izay koa i Md Paoly tao amin’ny vakiteny faharoa teo nanao hoe izany no torianay ary izany koa no hinoanay. Raha atambatra ireo vakiteny telo ireo ka afantoka bebe kokoa amin’ny fandinihana ny Evanjely, niasa i Simôna nandritra ny alina, izy izay efa matihanina amin’ny fanjonoana ary fantany tsara fa amin’ny andro alina tena hahazoana trondro betsaka ka niasa arak’izay fahaizany izy fa tsy nahazo vokatra.
Tahak’izay koa ny fiainantsika olombelona, mitady isika fa tsy miaraka miasa amin’Andriamanitra. Tahak’izay koa, manana olana isika any an-tokantrano, any amin’ny fiaraha-monina, manana olana isika tsirairay avy dia mitady vahaolana amin’ny herin’ny tenantsika samy irery. Vao maika mikorontana satria isika mitady vahaolana ivelan’Andriamanitra. Zava-dehibe ity Evanjely androany ity satria milaza an’i Simôna niasa nandritra ny alina, nanaiky ny tenin’i Jesoa izy ka vokany dia nahazo trondro be dia be. Raha manaiky ny hidiran’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika isika dia tsy maintsy mivaha ny olana mitranga rehetra, raha tena manaiky marina isika dia tsy maintsy vahan’i Jesoa ny olana. Ary manaiky ny teniny mihitsy isika tahaka ny nataony tamin’i Simôna izay nilazany hoe alatsaho ny haratonareo, nanaiky i Simôna dia izay no vakany, tsy tambo isaina ny trondro azon’izy ireo. Raha tiantsika hivaha ny olana dia io ihany ny vahaolana, manaiky an’i Jesoa hiditra eo amin’ny fiainantsika, eo amin’ny tokatranontsika, manaiky an’i Jesoa izay miteny amintsika isan’andro amin’ny feon’ny fieritreretana. Nolazain’ny Evanjely teo i Simôna namoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an’i Jesoa, navelany hatramin’ny trondro azony teo. Misy risika be io fiainantsika ny finoana io, mandao ny zavatra rehetra, miroso amin’ny lalina izany hoe manaraka ny hevitr’Andriamanitra. Ao koa ny Evanjely iray izay milaza ny fihetsika voalohany ho an’ny mpanara-dia an’i Kristy dia mamoy ny zavatra rehetra. Hoy ny Apostôly tamin’ni Jesoa : mpampianatra o ! indro izahay namoy ny zavatra rehetra, dia namaly i Jesoa : tsy nisy olona ka nahafoy ny rainy, ny reniny, ny vadiny, ny zanany, ny fananany ka nanaraka ahy no tsy hahazo zato heny amin’ny ankehitriny ary manginy fotsiny ny any an-danitra. Izay no vokatry ny fanarahana an’i Kristy sy ny famoizana ny zavatra rehetra, tahak’izay koa isika eo amin’ny fiainam-piangonana, mila mahay mahafoy tahaka ireo Apostôly ireo, mandao ny zavatra rehetra ka manaraka an’i Kristy, manaraka ny feon’ny fieritreretana. Fa io dia i Jesoa daholo no mandamina ny fiainantsika rehetra na inona na inona. Mila fahatokisana isika ary mila an’izay hoe mirisika manaraka an’I Jesoa izay.
Tamin’ny fiantombohan’ny sorona masina teo isika dia nanamasina ireny labozia ireny, tamin’ny 02 Febroary teo no nakalazana ny nanolorana ny Tompo tao an-tempoly, nisy olona roa niandry an’I Jesoa tao an-tempoly dia i Simeona lahiantitra sy Anne. Araka ny lalànan’ny Jody ny lahimatoa teraka rehetra dia masina ary voatokana ho an’Andriamanitra ka rehefa teraka kelikely I Jesoa dia nentin’i Maria sy Josefa atolotra ho an’Andriamanitra. Rehefa tonga tao dia noraisin’i Simeona ary avy eo izy nanome voninahitra an’Andriamanitra. Araka ny vavaka tononkirany manao hoe”ankehitriny Tompo dia azonao alefa am-piadanana araka ny sitraponao ny mpanomponao fa efa ny masoko no nahita ny famonjena an’Israely, dia ilay hazavana manilo ny firenena voninahitr’Israely vahoakanao”. Nanome voninahitra an’Andriamanitra no nataon’i Simeona satria izy efa nomen’Andriamanitra toky fa tsy ho faty raha tsy mahita an’i Kristy. Io koa dia adidintsika ny midera an’Andriamanitra. Ary ny fahatelo dia i Anne vaviantitra, noho izy nivavaka dia afaka nahita ny Tompo, dia eo no idiran’ny jiro masina amin’ny fanolorana ny Tompo, inty ilay hazavana natao hanilo ny firenena, izay no antony hankalazantsika ny jiro masina isaky ny 02 Febroary.
Ampiasaintsika ny jiro masina amin’ny fotoan-dehibe ohatra manana olana isika eo amin’ny fiainana, tahotra, tebiteby. Areheto ny jiro amin’ny fotoana ahatsapantsika fa mitady harefo sy mangozohozo ny finoantsika. Tandindon’i Kristy io jiro io mba hampisava ny tahotra misy ao amintsika.